१० बाइबिल पद तपाइँ बिर्सनुहुन्न जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ | प्रार्थना बिन्दुहरु
घर बाइबल पदहरू १० बाइबल पद तपाइँ बिर्सनुहुन्न जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ
आज हामी १० बाइबिल पद संग व्यवहार गरीरहेछौ जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ बिर्सनु हुँदैन। जब हामी छौं बिरामी, मात्र दिमागमा आउँछ कि हामी कसरी निको पाउन सक्छौं। रोग एक भयानक कुरा हो। कहिलेकाहीँ यो विशेष प्रकारको छ प्रलोभनको र एक विश्वासी को माध्यम बाट जानु पर्ने थियो कि परीक्षण, अय्यूब को कथा सम्झना ?. रोग धेरै पीडा र दु: ख संग भरिएको छ। म प्रार्थना गर्दछु कि हामी मध्ये कोहि येशू को नाम मा बिरामी पर्नुहुन्न।
जे होस्, यदि तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ, यहाँ १० बाइबल पद तपाइँ बिर्सनु हुँदैन।
के तपाइँहरु मध्ये कोहि पीडित हुनुहुन्छ? उसलाई प्रार्थना गरौं। कोहि हर्षित हुनुहुन्छ? उहाँको प्रशंसा गाउन दिनुहोस्। के तपाइँहरु मध्ये कोहि बिरामी हुनुहुन्छ? उसलाई चर्चका एल्डरहरु लाई बोलाउन दिनुहोस्, र उनीहरु उहाँ माथि प्रार्थना गर्न दिनुहोस्, उसलाई प्रभुको नाममा तेल लगाएर।
प्रशंसा मा उपचार छ। जब हामी भगवान को प्रशंसा गर्छौं, हामी रोगहरु वा रोगहरु को सबै प्रकार बाट निको हुन्छौं। तपाइँ यो पनि याद गर्नु पर्छ कि धर्मी को लाभदायक प्रार्थना को लाभ। थोरै आश्चर्य छ कि शास्त्रले चेतावनी दिन्छ कि बिरामी व्यक्ति चर्च को एल्डरहरु को लागी बोलाउनु पर्छ, उनीहरु उसलाई प्रार्थना गर्न दिनुहोस् र प्रभु को नाम मा तेल संग उनको घोषणा गर्नुहोस्।
तपाइँ यो बिर्सनु हुँदैन कि annointing जुवा तोड्छ। जब एक मानिस अभिषेक गरिन्छ, रोग को जुवा नष्ट हुन्छ।
यशैया 41: 10
नडराऊ, किनकि म तिम्रो साथमा छु; नडराऊ, किनकि म तिम्रो परमेश्वर हुँ। म तिमीलाई बलियो बनाउनेछु, म तिमीलाई मद्दत गर्नेछु, मँ मेरो धर्मी दाहिने हातले तिमीलाई समर्थन गर्नेछु।
कहिलेकाहीँ जब हामी बिरामी हुन्छौं, हामी डराउँछौं। कहिलेकाहीँ हामी के गर्ने थाहा छैन। विशेष गरी जब हामी लागूपदार्थहरु लिएका छौं र यो दुखाइ वा बिरामी मात्र टाढा जान्छ जस्तो लाग्छ। सधैं जान्नुहोस् कि भगवान त्यो भयानक रोग मा पनि तपाइँ संग हुनुहुन्छ र उहाँले तपाइँलाई यो बाट बाहिर मद्दत गर्नुहुनेछ।
त्यो रोग तपाइँलाई परास्त गर्दैन, जब तपाइँ यो याद गर्नुहुन्छ, यसले तपाइँलाई रोग को बिरूद्ध शक्ति दिन्छ।
र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामी परेकोलाई बचाउनेछ, र प्रभुले उसलाई उठाउनुहुनेछ। र यदि उसले पाप गरेको छ भने उसलाई माफ गरिनेछ। तसर्थ, एक अर्कालाई आफ्नो पाप स्वीकार र एक अर्का को लागी प्रार्थना गर, कि तिमी निको हुन सक्छौ। एक धर्मी व्यक्ति को प्रार्थना ठूलो शक्ति छ यो काम गरीरहेको छ।
याद गर्नुहोस् कि विश्वास बिना भगवान लाई खुसी गर्न असम्भव छ। उहाँ जसले भगवान बाट प्राप्त गर्नुहुनेछ उहाँ भगवान हुनुहुन्छ र उहाँ लगनशीलताले उहाँलाई खोज्नेहरु को एक पुरस्कृत हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्छ। जब तपाइँ विश्वास संग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बिरामी गायब हुनेछ। भगवानले कुनै पनी पाप क्षमा गर्नुहुनेछ जुन तपाइँको जीवन मा रोग को कारण हो र तपाइँ निको हुनुहुनेछ।
जे होस्, त्यो भन्दा पहिले, तपाइँ तपाइँको पापहरु लाई स्वीकार गर्नु पर्छ। याद गर्नुहोस् हितोपदेश को पुस्तक भन्छन कि उहाँ आफ्नो पाप लुकाउनुहुन्छ समृद्धि हुदैन तर उनी जसले उनीहरुलाई स्वीकार गर्छन् दया पाउनेछन्। तपाइँको पाप स्वीकार गर्नुहोस्, विश्वास संग प्रार्थना गर्नुहोस् र तपाइँ त्यो रोग बाट निको हुनुहुनेछ।
हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म तपाईंलाई मद्दतको लागि पुकारें, र तपाईंले मलाई निको पार्नुभयो। हे परमप्रभु, तपाईंले मेरो प्राण शियोलबाट उठाउनुभएको छ; तिमीले मलाई खाडल मा जानेहरु मध्ये बाट जीवित बनायौ।
प्रभु समस्या को समयमा हाम्रो वर्तमान मद्दत हो। जब जीवन को समस्या हामी मा उग्र आउँछ, हामी मद्दत को लागी रोएर थकित हुनुहुन्न, हाम्रो मद्दत प्रभु बाट आउनेछ। याद गर्नुहोस् कि भगवान एक हुनुहुन्छ जसले राम्रो स्वास्थ्य पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्टर skelter स्थानहरु जहाँ तपाइँ मद्दत पाउन सक्नुहुन्न, प्रार्थना मा प्रभु को लागी आफ्नो बोझ लिनुहोस् नगर्नुहोस्।
जसरी एक बुबाले आफ्ना छोराछोरीलाई करुणा देखाउनुहुन्छ, त्यसरी नै परमप्रभु उसलाई डराउनेहरु प्रति करुणा देखाउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो फ्रेम जान्नुहुन्छ; उनी सम्झन्छन् कि हामी धुलो हौं।
जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ शैतान तपाइँ मा एक छिटो खेल्न को लागी कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ एक भयानक अनुभूति हुन सक्छ कि तपाइँको बीमारी टाढा जाने छैन। यो तपाइँको मुटु मा एक अप्रिय डर पैदा गर्न सक्छ।
यो जान्नुहोस् र शान्ति जान्नुहोस्, भगवानले तपाइँलाई दया देखाउनुहुनेछ। यदि हाम्रो पार्थिव बुबा सही क्षमता मा दया देखाउन को लागी जब हामी एक को जरूरत छ, त्यस्तै गरी हाम्रो स्वर्गीय बुबा हो।
परमप्रभुले उसलाई उसको बिरामी ओछ्यानमा राख्नुहुन्छ; उसको रोग मा तपाइँ उसलाई पूर्ण स्वास्थ्य मा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्।
भगवान एक महान पुनर्स्थापक हुनुहुन्छ। उसले भन्यो कि ऊ क्यान्सर कीराले हामी बाट लिएको बर्षहरु लाई पुनर्स्थापित गर्नेछ। त्यसोभए उहाँले हामीलाई पूर्ण स्वास्थ्यमा पुनर्स्थापना गर्ने वाचा पनि गर्नुभयो। उहाँ हामीलाई धान्न सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ एक्लै राम्रो स्वास्थ्य पुनर्स्थापना गर्ने शक्ति छ र उसले त्यसो गर्ने वाचा गरेको छ। नडराउनुहोस्, किनकि भगवान तपाई संग हुनुहुन्छ।
2 कोरिन्थी 1: 3-4
धन्य हो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता, दयाका पिता र सबै सान्त्वनाका भगवान, जसले हाम्रा सबै कष्टमा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, ताकि हामी जो सुकै पीडामा रहेकाहरुलाई सान्त्वना दिन सकौं, जसको साथमा हामी आफैं भगवान बाट सान्त्वना पाएका छौं।
भगवान हाम्रो सान्त्वनादाता हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो समस्याको समयमा सान्त्वना दिने क्षमता छ। बिरामी को भयानक दुखाइ को बावजुद, तपाइँको हृदय प्रभु मा शान्ति पाउनुहुनेछ यदि तपाइँ प्रभु मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सम्हाल्न को लागी सबै कुरा छोड्न सक्नुहुन्छ।
मत्ती 11: 28-30
मकहाँ आउनुहोस्, ती सबै जो मेहनत गर्छन् र भारी बोझले दबिएका छन्, र म तिमीलाई आराम दिन्छु। मेरो जुवा तिमीमा लिनुहोस्, र म बाट सिक्नुहोस्, किनकि म कोमल र हृदयमा नम्र छु, र तपाइँ तपाइँको आत्माहरु को लागी आराम पाउनुहुनेछ। मेरो जुवा सजिलो छ, र मेरो बोझ हलुका छ।
जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ तपाइँको आत्मालाई आरामको कुनै कमी छैन। तपाइँलाई मात्र केहि चाहिन्छ जुन दुखाइ टाढा लैजान्छ र तपाइँलाई ध्वनि आराम दिनुहुन्छ। धेरैले पनी अन्तिम पटक सम्झन सक्दैनन् कि उनीहरु दुखाइ को कारणले राम्रो राती निदाएका थिए कि टाढा जाने छैन। शास्त्र भन्छ, तिमीहरु सबै आऊ कि श्रम र भारी बोकेका छौ, म तिमीलाई आराम दिनेछु। अब तपाइँ आराम पाउन को लागी सही ठाउँ जान्नुहुन्छ, प्रार्थनामा प्रभुमा जानुहोस्।
रोमी 8: 18
किनकि म जान्दछु कि वर्तमान समयका कष्टहरू हामीलाई देखाइने महिमासँग तुलना गर्न लायक छैन।
तिमी एउटा सुन जस्तै छौ जो आगो बाट गुज्रिरहेको छ। जब यो कच्चा रूप मा सुन संसाधित छ, यो भट्टी बाट बाहिर आउँछ एक खजाना को रूप मा पोषित गर्न को लागी। तेसैले भगवान तपाइँलाई केहि महान को लागी तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जान्नको लागी धेरै खुशी छ कि सबै चीजहरु मिलेर भगवान को लागी माया गर्नेहरुको लागी राम्रो को लागी काम गर्दछ।
यो वर्तमान पीडा खुशी को तुलना मा अनावरण गर्न को लागी केहि छैन।
समस्याको दिनमा मलाई बोलाउनुहोस्; म तिमीलाई बचाउनेछु, र तिमीले मेरो महिमा गर्नेछौ। ”
भगवान सधैं आफूलाई राजाको रूपमा देखाउन चाहानुहुन्छ। जब तपाइँ समस्यामा हुनुहुन्छ, प्रभुलाई बोलाउनुहोस् र तपाइँ बचाउनुहुनेछ।
अघिल्लो लेखमा५ कारणहरु हरेक ईसाईहरु लाई सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्छ
अर्को लेखमा5 कारणहरु तपाइँ भगवान लाई राम्रो संग जान्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ
भजन १२118 अर्थ पद पद द्वारा
तपाईंको प्रार्थनालाई शक्तिशाली वशमा पार्नुहोस्